Afụ shooter 🥇 Tinye na-enwe si emulator.online
afụ shooter bụ egwuregwu n'ihi na gam akporo na iOS na-achọ ngwa ngwa echiche na kpọmkwem aiming. Egwuregwu ahụ nwere ọdịdị dị oke mma na egwuregwu dị mfe. Lelee ndụmọdụ anyị ma mụta igwu egwu egwuregwu a.
Etu esi egwu bọọlụ afụ 🙂
Iji kpọọ afụ shooter online free, ị dị nnọọ nwere soro ntuziaka ndị a nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ egwuregwu Emulator.online
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo. Ikwesiri ime kụrụ egwuregwu ma ị nwere ike ịmalite ịhọrọ nhazi nke kachasị amasị gị. Ozugbo i meriri egwuregwu ị nwere ike ịkwa ọkwa. Enwere ngụkọta nke ọkwa 5.
Nzọụkwụ 3. Ndị a bụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", Nye bọtịnụ"Play"Ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"na"Malitegharịa ekwentị"oge obula.
Nzọụkwụ 4. Nweta iwepu niile egosipụta na egwuregwu.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa "Malitegharịa ekwentị" ịmalite ọzọ.
Gịnị bụ afụ shooter? 🤓
Afụ shooter bụ otu n'ime egwuregwu mmekọrịta kasị ama afụ shooter na a maara, n'ihi na ọ dị mfe nke play na ịbụ nnọọ kensinammuo. I nwere ike ikwu ya Ọ bụ ngwakọta nke abụọ ọzọ nnọọ ama egwuregwu dị ka "tetris" na "jikọọ anọ", nke na-eme afụ shooter a nnọọ fun game.
Ebumnobi Afụ shooter dị nnọọ mfe: anakọta dị ka ọtụtụ ihe dị ka o kwere na-ebibi agba egosipụta. Iji bibie egosipụta, ọ dị mkpa ijikọ ma ọ dịkarịa ala egosipụta atọ nke otu agba.
Akụkọ banyere afụ shooter 🙂
Ọ bụ ihe ọchị na ewu ewu egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke anyị niile na-egwuri egwu n'oge ụfọdụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị amaghị na mgbọrọgwụ ya bụ na egwuregwu nke pụta na Japan arcades na 80s, na mbu akpọ ya Afọ Bobble. Ọ bụghị ruo mgbe 90s ka ọ ruru West, mana ya na ụfọdụ mgbanwe site na egwuregwu mbụ.
Afụ ụfụ E wepụtara ya na 1986 na arcades ndị Japan. N'ime ya, obere dragọn abụọ, Bub na Bob, na-eche ihu a aventura, na ụfọdụ ihe nke egwuregwu mgbagwoju anya na agha megide ndi iro ha na nke ọ bụla.
Na a graphic dị ka oge na-aga, na-echetara anyị Japanese cartoons, na juego kwụpụrụ n'ahịa maka ịbụ ọchị na eri ahụ, ihe dị mkpa maka arcade. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime egwuregwu mbụ iji echiche nke "otutu ọgwụgwụ", ihe ga-ewu ewu naanị na egwuregwu ndị oge a. Dabere na arụmọrụ nke onye ọkpụkpọ ahụ, njedebe nke njem ahụ nwere ike ịdị iche
Dị ka ọ dị na mbụ, egwuregwu ahụ gara naanị Japan, na 1994, ụlọ ọrụ mmepụta ihe Taito kpebiri ịzọpụta ndị ama ama ya ma hapụ ha na aha ọhụrụ. Oge a kpọrọ Mgbaghoju anya afụ, na ndị dị ọcha mgbaghoju anya arụzi. Egwuregwu ahụ kụrụ ozugbo.
Site na nsụgharị ọhụrụ a, ha jisiri ike mee ihe dị iche na nke ha bụbu. Ha na-etinye ikpo okwu na ndị iro iji mee ka anyị banye mgbaghoju anya egwuregwu nke kenha iberibe nke otu agba akara ihe. Mana, n'adịghị ka Tetris, ihe ọzọ kụrụ n'oge ahụ, iberibe si na ala elu, nke Bub na Bob wepụtara.
Ọ bụrụ na i mejupụta ihuenyo ahụ iberibe, ị ga-enweta Egwuregwu karịrị. N'etiti iberibe a tụbara, nke bụ mmiri egosipụta, bụ ndị ọjọọ nke kpochapụwo egwuregwu maka akwụkwọ.
Abụọ egwuregwu ha nwere ike soro na-emekọ ihe ọnụ na ịkọ ọnụ ọnụ. Echiche bụ ịmebata ihe odide nke afọ iri gara aga na ọgbọ ọhụrụ nke ndị egwuregwu, mana oge a nwere ihu ọhụrụ. Ọ rụkwara ọrụ.
Bdị Afụ Ọgba ⭐
Enwere ihe karịrị ụdị 30 nke egwuregwu a ma ama, mana ndị kachasị mkpa maka vidiyo vidiyo ga-abụ:
Ultra Bust-A-Move na mgbaghoju anya Bobble Ndụ maka Xbox njikwa.
Na na-A-Bugharịa Ọkachamma maka PSP.
Ihe mgbagwoju anya Bobble 3D maka Nintendo (3DS).
Ihe mgbagwoju anya Bobble Online naanị maka PC.
Mgbaghoju anya afụ Disney (iOS).
Afụ shooter, free
N'ime ndị niile a kpọtụrụ aha, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, mmepụta okike kachasị nke Bust-A-Move bụ Onye na-agba ụta
Afụ shooter nwere a mfe anya na-ekwu. Nke a na oge egwuregwu bụ otú nchegbu inserting kpochapụwo ọcha nke usoro ya sitere n'ike mmụọ nsọ site, kama, ịnọgide na-enwe egwuregwu na-eri ahụ oro ama anam mme owo ẹma enye.
Egwuregwu ahụ na-akwado atụmatụ nke ịtụba akụkụ ahụ na akụ, iji kwekọọ na agba ha, na akara akara. Nnukwu ihe dị iche bụ na Afọ shooter na-awa maka free na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwa mkpanaka, ebe ebumnuche mbụ ya maka njikwa egwuregwu ma ọ bụ PC.
Afọ shooter Iwu 😍
Isi gi lekwasịrị na afụ shooter ọ bụ wepụ bọọlụ niile nwere agba site na ihuenyo agbapụ agba bọọlụ na egbe ala.
Cheta na ị ghaghị dakọtara ma ọ dịkarịa ala bọọlụ atọ nke otu agba ahụ nke mere na ihe ndị a niile gbawara, ma si otú ahụ kwụsị ihuenyo na bọọlụ niile kpochapụrụ. Na agba nke bọọlụ ndị na-apụta na gbọmgbọm ahụ enweghị usoro, ya mere, odighi nfe ka odi.
Iji mee nke a, ị ga-emetụ ihuenyo ahụ aka na ntụziaka nke ịchọrọ ịgba egbe, na-echebara agba nke bọọlụ ahụ agbapụrụ iji chọta nha ya.
Na mgbakwunye inwe anyị ike Mgbe ị na-ahọrọ ebe ị ga-etinye bọọlụ ahụ, ọ dịkwa ezigbo mkpa inwe ezigbo ebumnuche. Chọ ihe ọjọọ ma ọ bụ n’uzo na-ezighi ezi nwere ike ibute nsonaazụ na-akpata ọnwụ.
Must ga-akpachara anya n'ihi na ma ọ bụrụ na ahịrị nke bọọlụ agba agba rute na kaniyon, ị furu efu egwuregwu na ị ga-amalite ọzọ.
Ọ bụrụ na ịnwere bọọlụ ole na ole iji gwụ egwuregwu ahụ, ma ọ bụ agba agba bọọlụ nke na-apụta site na gbọmgbọm anaghị enyere gị aka iwepu bọọlụ, anyị ga-egosi gị nke a aghụghọ.
Debe bọọlụ ndị nwere agba na ị nweghị mmasị na otu (ma ọ bụ otu) nke otu agba ahụ ị nwere na ihuenyo ahụ, dịka ọmụmaatụ na bọọlụ abụọ Roses Ndị a bọọlụ mbụ ga-eme ka isi nke na-esonụ, na ozugbo ị ga-esi na agba mkpa ka ị agbaji ntọala ahụ, bọọlụ niile dị na ya ga-apụ n'anya.
N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịmechaa egwuregwu ahụ nke ọma ma gbochie bọọlụ iru egbe ala na-eme ka ị tufuo.